Pipe Hangers Hangers, mpamatsy - mpanamboatra paompy hangina China
Insulator Tube plastika UPC
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, nankatoavin'ny UPC izahay. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra. Ary koa, ny taolan-tehezany dia mamela ny fantsom-pivezivezy hidina mora kokoa sy mangina kokoa rehefa manitatra sy mifintina ny fantsona.
Clamp Pipe Locking haingana amin'ny fingotra
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa, ny fonosana fantsom-pandehananay haingana dia miaraka amina fantsom-bovoka EPDM ho an'ny fihenan'ny tabataba mifanaraka amin'ny DIN 4109. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra tany Eropa, Moyen Orient ary Azia. Ary mora ihany koa ny manidy azy ireo amin'ny tanana iray ihany.
Bell Hanger nopetahany varahina noho ny fampiatoana ireo fantsom-pifandraisana tsy miorim-paka
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa, ny lakolosy lakolosy vita amin'ny varahina dia natao hanantonana ireo fantsom-piaramanidina tsy voasiaka. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra. Ary koa, dia asiana visy fametahana roa sy visy miendrika iray.
Andininy U-Strap mavesatra miaraka amin'ny fehin-kibo
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny tadin-tsika mavesatra u miaraka amin'ny fehikibo vita amin'ny fingotra dia natao ary atolotra amin'ny fametrahana ny fantsom-pitrandrahana voatondraka na tsy misy volo, ary azo ampiasaina miaraka amin'ny sisin-doha vita amin'ny fingotra. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Azia. Ary koa, misy fitsaboana isan-karazany amin'ny safidinao: efa vita mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
Clamp antsasaky ny plastika UPC
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, ekena ny UPC. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra. Ary koa, ny fametrahana haingana sy mora.
Fanidiana Pipe Clamp haingana
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra ny orinasa, ny fantsom-pantsakanay fanidiana haingana dia famotsorana haingana ireo fantsona fisarahana amin'ny visy tokana. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Eropa, Moyen Orient ary Azia. Ary mora ihany koa ny manidy azy ireo amin'ny tanana iray ihany.